မေလ ၈ရက်နေ့ အိန္ဒိယမှာ launch လုပ်သွားမယ့် Google Pixel 3a နဲ့ 3a XL | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone မေလ ၈ရက်နေ့ အိန္ဒိယမှာ launch လုပ်သွားမယ့် Google Pixel 3a နဲ့ 3a XL
မေလ ၈ရက်နေ့ အိန္ဒိယမှာ launch လုပ်သွားမယ့် Google Pixel 3a နဲ့ 3a XL
Flipkart ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ teaser အသစ်လေးမှာတော့ Google Pixel 3a နဲ့ 3a XL ရဲ့ launch date ကို တွေ့ရပါတယ်။
လပေါင်းများစွာကြာအောင် ကောလာဟလတွေနဲ့ ပေါက်ကြားမှုတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက်မှာတော့ Pixel 3a နဲ့ 3a XL တို့ဟာ မေလ၇ရက်နေ့မှာ ထွက်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်။ တစ်ရက်အကြာမှာတော့ အိန္ဒိယကို ရောက်ရှိလာမှာပါ။
FoneArena ရဲ့ ထောက်လှမ်းချက်အရ teaser လေးဟာ ဖုန်းလေးကို tagline လေးနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ “Help is on the way. Something big is coming to the Pixel universe on 8th May.” ဒီစာသားလေးက ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေတုန်းကလည်း သူ့ရဲ့စတိုးပေါ်မှာ teaser တင်ခဲ့သုံးခဲ့တဲ့စာသားနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ဒီဇိုင်းကတော့ Pixel3၊3XL တို့နဲ့ အတူတူလောက်ပါပဲ။ စွမ်းဆောင်ရည်သင့် hardware တွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Pixel 3a ကတော့ ၅.၆လက်မ 1080p OLED display ၊ Snapdragon 670 ၊ Pixel 3a XL ကတော့ ၆လက်မ FHD+ OLED panel ၊ Snapdragon 710 တို့ကို အသုံးပြုပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းနှစ်လုံးစလုံးဟာ 4GB of RAM နဲ့ 32GB/64GB storage တို့ကို သုံးထားပါတယ်။ 12.2MP camera sensor ကိုပဲ သုံးပေးထားပါတယ်။
I/O 2019 မှာလည်း Pixel အသစ်တွေကို မြင်ရနိုင်ပါသေးတယ်။ မကြာခင်မှာ အကြောင်းစုံသိရတော့မှာဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီလား။
Flipkart ပျေါမှာတငျထားတဲ့ teaser အသဈလေးမှာတော့ Google Pixel 3a နဲ့ 3a XL ရဲ့ launch date ကို တှရေ့ပါတယျ။
လပေါငျးမြားစှာကွာအောငျ ကောလာဟလတှနေဲ့ ပေါကျကွားမှုတှကေို ကြျောဖွတျပွီးနောကျမှာတော့ Pixel 3a နဲ့ 3a XL တို့ဟာ မလေ၇ရကျနမှေ့ာ ထှကျဖို့လုပျထားပါတယျ။ တဈရကျအကွာမှာတော့ အိန်ဒိယကို ရောကျရှိလာမှာပါ။
FoneArena ရဲ့ ထောကျလှမျးခကျြအရ teaser လေးဟာ ဖုနျးလေးကို tagline လေးနဲ့ ဖျောပွထားပါတယျ။ “Help is on the way. Something big is coming to the Pixel universe on 8th May.” ဒီစာသားလေးက ပွီးခဲ့တဲ့အပတျတှတေုနျးကလညျး သူ့ရဲ့စတိုးပျေါမှာ teaser တငျခဲ့သုံးခဲ့တဲ့စာသားနဲ့ အတူတူပါပဲ။
ဒီဇိုငျးကတော့ Pixel3၊3XL တို့နဲ့ အတူတူလောကျပါပဲ။ စှမျးဆောငျရညျသငျ့ hardware တှကေို အသုံးပွုထားပါတယျ။ Pixel 3a ကတော့ ၅.၆လကျမ 1080p OLED display ၊ Snapdragon 670 ၊ Pixel 3a XL ကတော့ ၆လကျမ FHD+ OLED panel ၊ Snapdragon 710 တို့ကို အသုံးပွုပေးထားပါတယျ။ ဖုနျးနှဈလုံးစလုံးဟာ 4GB of RAM နဲ့ 32GB/64GB storage တို့ကို သုံးထားပါတယျ။ 12.2MP camera sensor ကိုပဲ သုံးပေးထားပါတယျ။
I/O 2019 မှာလညျး Pixel အသဈတှကေို မွငျရနိုငျပါသေးတယျ။ မကွာခငျမှာ အကွောငျးစုံသိရတော့မှာဆိုတော့ စိတျလှုပျရှားနကွေပွီလား။
Previous articleသုံးစွဲသူတွေကို အသစ်ပြောင်းကိုင်စေချင်တဲ့ Microsoft ရဲ့လုပ်ရပ်
Next articleမျက်နှာပြင်အောက်မှာ ကင်မရာနဲ့ sensor တွေ ထပ်ထည့်ချင်တဲ့ ဆမ်ဆောင်း